သစ္စာနီ| February 21, 2013 | Hits:17,583
21 | | မင်းကိုနိုင်လို မျိုးဆက်သစ် နိုင်ငံရေးသမားတွေ စာပေ ဟောပြောပွဲ စင်မြင့်တွေမှာ တွေ့နေရပြီ (ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ)
မုဆိုးခေတ်ကုန်ပြီမို့ လေးမြားတွေ သိမ်းကြစို့
8 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website aung thein nyunt February 21, 2013 - 12:02 pm	မင်းကိုနိုင်ရေးတာစာအုပ်တစ်အုပ်ထဲမဟုတ်ဖူး၊ စာအုပ်တွေထောင်သောင်းသိန်းသန်းမကဘဲ။ ပြည်သူတွေအတွက်ရေးခဲ့တာာ၊ မဖတ်ဖူးကြဘူးမဟုတ်လား၊ ကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတယ်၊ သူကနှစ်လုံးသားနဲ့ရေးတာ၊ ကျုပ်ကလဲနှလုံးသားနဲ့ပဲဖထ်တယ်၊
Reply	ွှTheingi Tun February 21, 2013 - 5:14 pm	နိုင်ငံရေးသမားတွေစာအရေးအသားကောင်းရင်၊ပြည်သူ့အကျိုးပြုစာဆိုရင်ကျနော်တို့လိုစာဖတ်ပရိတ်သတ်လက်ခံမှာပါပဲ။နိုင်ငံရေးသမားတွေစာပေဟောပြောပွဲစဉ်ပေါ်မတက်ရဆိုတာဘောင်ခတ်လိုက်တာပါပဲ။ကျနော်တို့လိုစာဖတ်ပရိတ်သတ်လက်မခံပါဘူး။နိုင်ငံ့အက်ျိုးပြုစာသော်လည်းကောင်း၊ရသစာသော်လည်းကောင်းပြည်သူကလက်ခံမှာပါပဲ။နိုင်ငံရေးသမားရေးလို့ဆိုပြီးပြည်သူကချန်ဖတ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
Reply	Swe htwe February 21, 2013 - 11:13 pm	It isagood article. Bravo !
Reply	မြန်မာတိုင်းရင်းသူ February 22, 2013 - 3:35 am	၀ယ်သူ ရှိရင် ရောင်းသူ ရှိမှာပဲ။ စားသူ ရှိရင် ချက်သူက မမောတမ်း ချက်မှာပဲ။ နားထောင်မယ့်သူရှိရင် ဘယ်သူ တက် ပြော ပြော ပွဲက ဖြစ်မှာပဲ။
Reply	lwinhtaytunwai February 22, 2013 - 10:23 am	လက်မခံနိုင်၊စင်မြင့်တခုထဲအတူမဟောနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေဟာတကယ့်စာရေးဆရာမဟုတ် လို့ပေါ့။သူတို့ကိုသူတို့ဘာတွေထင်နေလို့လဲမှမသိတာ။သိပ်ကြီးကြယ်မနေကြနဲ့။မနာလိုဖြစ်မနေ ပါနဲ့။ စာရေးဆရာလဲပြေားသေ၊မနာလိုစိတ်လဲများသေ။
Reply	Shwe Hninsi February 22, 2013 - 11:04 am	Some Politicians write really good articles and books. These writers have the same rights like any other writers and authors. Freedom of press is for everyone. Politicians must not be excluded by this freedom.
Reply	angel February 22, 2013 - 4:12 pm	ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့သတ္တိရှိရှိမတတ်ရင်မတတ်ဘူး။ ဝန်ခံရဲတဲ့သတ္တိ နဲ့မဟုတ်ရင်မဟုတ်
Reply	Min Theint Oo February 28, 2013 - 1:01 pm	အောင်မြင်တဲ့ စာရေးဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ စာများများ ရေးဖို့ မလိုပါဘူး။ စာဖတ်ပရိသတ် အကျိုးရှိဖို့၊ လက်ခံဖို့နဲ့ ကြိုက်နှစ်သက်ဖို့ပဲ လိုတာပါ။ စာတွေအများကြီးရေးပြီး စာဖတ်ပရိသတ် မသိတဲ့ စာရေးဆရာတွေ အများကြီးပါ။ တစ်အုပ်တည်းနဲ့ ပေါက်အောင်ရေးနိုင်ဖို့ဟာ တော်ယုံအစွမ်း၊ တော်ယုံ အရည်အချင်းတော့မဟုတ်ပါ။